Ciidamada Amaanka Kenya Ayaa Gacanta Ku soo Dhigay Rag Lagu Tuhmayo Al-shabaab – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Amaanka Kenya Ayaa Gacanta Ku soo Dhigay Rag Lagu Tuhmayo Al-shabaab
Ciidanka Amaanka Dalka Kenya,gaar ahaan Gobolka Xeebta ah ee mombasa ayaa shaaciyay in ay gacanta ku dhigeen 8 Qof oo ay ku tuhmayaan in ay qorsheynayeen weerarro ka dhan ah Dowladda Kenya.
Ciidanku waxaa ay sheegeen in iyaga oo ka duulaya wargelintii Laamaha sirdoonka ee ahayd in Bisha Ramadan Al-shabaab weerarro badan ka geysan doonaan Kenya ay howlgal ka dhan ah ka billaabeen Lamu iyo degaannada hoostaga halkaas oo ay ku qabteen 8 Qof.
Afhayeen Booliska u hadlay ayaa sheegay in Masaajid ku yaalla Magaalada Lamu ay ka xireen 4 Qof,4 kalena ay Isniintii ka xireen degaanka Kwale oo ka tirsan Gobolka Xeebta ah.
4 ta laga soo xiray Lamu ayaa waxaa loo ka xeeyay dhanka Malindi,halkaas oo sida uu sheegay Booliska Kenya ay ku wajihi doonaan Maxkamadda la dagaallanka Argaixisada ee Dalka Kenya.
Afhayeenka u hadlay Booliska ayaa sheegay in Isniintii la dilay 5Sarkaal oo ka tirsan booliska Kenya laguna dilay Mandheera,5 kale la dhaawacay,3na nolosha lagu qafaashay.
4 Qof ee laga xiray Lamu ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Ibrahim Mohammed Abdi, Hamisi Kassim, Idris Aden iyo Shadrack Mondao Kaya,waxaana ay intaa ku dareen Booliska in Isniintii ay sidoo kale toogteen AlI Salim oo ay ku tuhmayeen in uu ka tirsan yahay Al-shabaab.
Madaxweynaha Puntland oo u ambabaxay Baydhabo
Ciidamada Ahlusuna oo Guriceel ku xiray Ugaaska Beesha Cayr iyo dibad baxyo ka dhashay